१ जनवरीमा नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै
अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् १ जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै छ । विगत पाँच वर्षदेखि मनाउन सुरु गरिएको यो दिवस यो वर्ष पनि सफल बनाउन नेपाली टोपी दिवसका संस्थापकद्वय डा. लेखनाथ काफ्ले र शंकर बञ्जाडेले आग्रह गरेका छन् ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई नेपालीपनमा स्वागत गर्न जनवरी १ का दिन शिरमा नेपाली टोपी लगाएको फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । यसका लागि फेसबुक पेज डब्लुडब्लुडब्लू डट फेसबुक डट कम नेपालीटोपी डे www.facebook.com/nepalitopiday छ ।
ताइवानमा रहँदै आएका डा. काफ्ले र नेपालमा रहेका बञ्जाडेले सन् २०१४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवसको प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेका छन् । देश–विदेश जहाँ रहे पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट नेपाली टोपी दिवस मनाउँदा नेपाली संस्कृतिको प्रचार संसारभर हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
डा. काफ्ले र बञ्जाडे
नेपालमा धेरै प्रकारका टोपी प्रयोग हुने भए पनि भादगाउँले, ढाका र जातजातिअनुसारको परम्परागत टोपी नै नेपाली टोपी हुन् । आफ्नो क्षेत्र, जातिअनुसार शिरमा पहिरिने विशेष टोपी लगाएर खुकुलो दिवसका रूपमा यो दिवस मनाउन र नेपाली हुनुमा गर्व गर्न संस्थापकद्वयले आग्रह गरेका छन् ।